गर्मी मौसमले दिलाएको व्यवसायिक अवसर – HamroKatha
गर्मी मौसमले दिलाएको व्यवसायिक अवसर
गर्मी मौसममा हामीले सबैले आफ्नो नियमित हेरचाहका लागी सितल खाना र हलुका, नरम कपडामा ध्यान दिएकै हुन्छौं I ठुलो संख्याले जब एउटै विषयलाई ध्यान दिन्छ जब व्यवसायीहरुका लागी अवसर सिर्जना हुन्छ I गर्मी मौसमको समयकै निम्ति एउटा व्यवसायिक अवसर हो - आइसक्रिम र दहिको व्यापार ।
हाम्रो कथा २०७६ असार २१ गते १६:०८
गर्मी मौसममा हामीले सबैले आफ्नो नियमित हेरचाहका लागी सितल खाना र हलुका, नरम कपडामा ध्यान दिएकै हुन्छौं I ठुलो संख्याले जब एउटै विषयलाई ध्यान दिन्छ जब व्यवसायीहरुका लागी अवसर सिर्जना हुन्छ I गर्मी मौसमको समयकै निम्ति एउटा व्यवसायिक अवसर हो – आइसक्रिम र दहिको व्यापार ।
नेपालमा १ वर्षमा करिब ५० देखि ५५ करोड रुपैयाको आईसक्रिम विक्री हुन्छ । र यसको वजार वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतका दरले वृद्धि भैरहेको छ ।
एण्डिज, क्वालिटी, मार्टिन, डिडिसि, आइसक्रिम बजारमा केही चलेका नाम हुन् । यी लगायत देशभरमा करिब १५ वटा जति आईसक्रिम उद्योग छन् । यसवाहेक केही अन्तराष्टिय आईसक्रिम ब्राण्डहरु पनि नेपाली बजारमा प्रवेश गरेका छन् ।
साधारणतया, यी सवै उद्योगले दुई तरिकाले आईसक्रिम बेच्छन् । एउटा कोनमा राखेर । अर्को यस्तो प्लाष्टिकको वट्टामा राखेर । करिब आधा अर्व रुपैयाको वार्षिक वजार र २० प्रतिसतको वजार वृद्धि देखेर कोन उद्योगहरु स्थापना भए । अहिले उपत्याकामा मात्र यस्ता कोन उद्योगहरुको संख्या १५ वटा भन्दा माथि छ । तर, ति मध्ये धेरै उद्योग लगभग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसका केही खास कारण छन् ।
यसको मुख्य कारण सिजनसँग सम्वन्धित जस्तो देखिन्छ । जस्तो कि वजारमा आइसक्रिमको माग फागुनदेखि शुरु भएर असोजसम्म रहन्छ । त्यसपछि फागुनसम्मको समय आईसक्रिमका लागि अफसिजन हो । यो समयमा आईसक्रिम ८० प्रतिशतसम्म विक्री कम हुन्छ । जस्तो कि एण्डिजले सिजनको वेला दैनिक ४ हजार लिटरसम्म आइसक्रिम विक्री गर्छ । तर, जाडो महिना लागेपछि वजार माग दैनिक माग ५ देखि ८ सय लिटरमा खुम्चिन पुग्छ । यसको सोझो प्रभाव कोन उद्योगमा पर्ने नै भयो ।
साधारणतया, अधिकाशं कोन उद्योगहरु घरेलु प्रकृतिका छन् । ५ महिनासम्म विना व्यापार वस्नु पर्दा यी उद्योगहरु सकसमा पर्छन् । अनि सिजनको समय आँउछ । त्यतिवेला डिमाण्ड हवार्ररर वढ्छ । जव आईसक्रिम उद्योगवाट डिमाण्ड आँउछ । थलिएका कोन उद्योगले विभिन्न कारणले सप्लाई दिन सक्दैनन् । अनि आईसक्रिम उद्योगीहरु विकल्प तिर लाग्छन् । जस्तो की अहिले पनि एण्डिजले आयात गरेको कोन वेचिरहेको छ । अर्को कारण यस्तो पनि छ । साधारणतया, बजारमा २ खालका कोनको माग छ ।
आईसक्रिम उत्पादकहरु भन्छन्, वजारमा खाली नर्मल कोन मात्र उत्पादन भईरहेको छ । अर्थात स्विट कोन उद्योगीहरुले वनाईरहेका छैनन् । आईसक्रिम उद्यागीहरु नर्मल कोनमा आईसक्रिम मात्र वेच्न तयार छैनन् । त्यसैले पनि नेपाली कोनको वजार खुम्चिदो अवस्थामा छ ।
त्यसमाथि बोकी हिड्न सजिलो र पग्लेर चुहिने डर कम हुने हुदा प्लाष्टिकको कपको प्रयोग वढ्न थालेको छ । त्यसले पनि कोनको वजार खुम्चाईरहेको छ । त्यसमािथ केही वेकरी, आइसक्रिम पार्लोर तथा आइसक्रिम उत्पादकहरु आफैँ पनि कोन उत्पादन गर्न तम्सिएका छन् । त्यसको सोझो असर कोन उत्पादकहरुलाई पर्न गएको छ । जस्तो कि ललितपुरको हिमालयन बिन्ज कफी स्टोरले आफूलाई चाहिने कोन आफै उत्पादन गर्छ ।
यसरी वजार खुम्चिदै गएपछि केही कोन उद्योगहरु उत्पादन विविधीकरणमा लागेका छन् । अनि केही कोन उद्योगहरुले व्यवसाय नै परिर्वतन गरेका छन् । जस्तो पाटन औद्योगीक क्षेत्र भित्र रहेको यो आनन्द कोन उद्योगले अहिले प्लाष्टिक उत्पादन गर्न थालेको ।
तर विडम्वना कस्तो छ भने, वजारमा टिक्न नसकेर नेपाली कोन उद्योगहरु वन्द भईरहेका छन् । तर, फेरि यही वजारले वार्षिक लाखौंको संख्यामा कोन भारतवाट आयात हुन्छ । यसको अर्थ हो, नेपालमा आईसक्रिम कोनको वजार त छ तर हामीले हाम्रै वजारले खोजे जस्तो कोन उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौ । बजारले खोजे अनुसारको गुणस्तरमा कोन उत्पादन हुने हो भने कोनको बजार पर्याप्त रहेको आईसक्रिम उद्योगीहरु बताँउछन् ।
कोन उद्योगीहरुले ध्यान दिनु पर्ने केही कुराहरु छन् । त्यसमध्ये सवैभन्दा महत्वपूर्ण चाही गुणस्तरता र विविधता हो । विकसित मुलुकमा उमेर र समयलाई लक्षित गरि कोन उत्पादन गरिन्छ । जस्तो ६ बच्चाले प्रयोग गर्ने कोन र ६० वर्ष पुगेका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने कोन छुट छुट्टै किन नवनाउने ? भ्यालेन्टाईन डे र आमाको मुख हेर्ने दिनमा प्रयोग हुने कोन किन भिन्दा भिन्दै नवनाउने ? यदि यसो गर्न सकियो भने शायद गुमेको वजार फेरि फर्काउन सकिन्छ ।
गर्मी मौसमले दिलाएको अर्को अवसर हो – दहि उत्पादन र किनबेच I नेपालमा गर्मीको मौसममा प्रतिदिन ३ लाख लिटरसम्म दहीको माग रहेको विश्वासिलो अनुमान छ । यसको अर्थ देशभरीमा दैनिक ३ करोड रुपैयाको दही विक्री हुन्छ भन्ने हो । दुग्ध विकास संस्थानको तथ्यांक अनुसार, देशभरिमा दही मागको १५ प्रतिशत आर्पूिर्त मात्र रष्जिटर्ड डेरी अर्थात औपचारिक क्षेत्रबाट हुन्छ । वाँकी माग अनौपचारिक रुपमा पुरा भईरहेको छ । अहिले देशभर दुग्ध विकास संस्थानले मात्र दैनिक २० हजार लिटर भन्दा बढिको दहि बिक्रि गर्दैआइरहेको छ । दहीको माग कति छ भने, कहिलेकाँही जनकपुर क्षेत्रबाट मात्रै दैनिक ५ देखि ७ हजार लिटरसम्म दहिको माग आउन थालेको छ । गर्मीको समयमा लस्सी लगायतका चिसो आईटमको माग वढे सँगै दहीको माग वढ्न थालेको हो ।
फेरि दुध बेच्नुमा भन्दा दहीमा वढि फाईदा देखिएको छ । जस्तो हामी यही विचार गरौ न, यदि तपाईले डिडिसीको १ लिटर स्टाण्र्डड दुध किन्नु पर्यो भने जम्मा ६४ रुपैंया तिरे पुग्छ । तर त्यहि दुधबाट बन्ने १ लिटर दही किन्नु पर्यो भने चाँहीे ११० रुपैंयासम्म तिर्नु पर्छ ।
फेरि राजधानीमै पनि एकाध डेरीवाट उत्पादित वाहेक त्यति व्यवस्थित ढंगले दहि बेचिदैन । प्याकेजिगं राम्रो व्यवस्था हुदैन् । कतिपय विक्रेताहरुले दही भण्डारण राम्रोसँग नगर्ने हुँदा गुणस्तरको समेत समस्या छ । त्यसमाथि दहीमा विविधताको कही छ । त्यसैले सानो लगानीमा दहीलाई मात्र फोकस गरेर केही गर्न सकिन्छ भने विचार गरौँ ।